Godwin Mangudya - VOA Author Bio - Voice of America
Produced by Godwin Mangudya
Nhumwa yeUnited Nations munyaya dzekodzero dzevanhu, VaClement Voule, yasangana nemutauri weNational Assembly pamwe nemasachigaro emakomiti ose eparamende vakazeya nyaya dzakasiyana siyana .
Dare remakurukota razeya nyaya yachiremba akapembwa nemusi weMugovera, Dr Peter Magombeyi, uye raita chisungo chekuti mapazi ese ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa nekudzvirirwa kwenyika, atsvage kuti chiremba ava vari kupi.
Gunyana 14, 2019
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, Vanokumbira Ruregerero
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaposa, vakumbira ruregerero kuvanhu vanga vari kuNational Sports Stadium pamusoro pemhirizhonga iri kuita kunyika kwavo vachiti vane hurombo nezvakaitika.
Zimbabwe Inoti Hapana Zvainogona Kuita Kumisa Mhirizhonga muSouth Africa
Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhionga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa.
Vanhu Vatatu Vanofira Mumba Mushure Mekupisirwa Imba muKethlehong muJohannesburg?
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa neChina mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp iri Kethlehong kumabvazuva kweguta reJohannesburg.
VaMahiya Vanoti Vakazvipira Kuenda kuHondo Vachidzivirira Kupambwa kweZimbabwe neEU
Vachitaura nevatori venhau, munyori anoona nezvevakarwa hondo muPolitiburo yeZanu PF, VaDouglas Mahiya, vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare.
Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga asunga nhengo dzesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, apo dzange dzichiratidzra pamahofisi ebazi rezvemari.
Dare redzimhosva raramba kutambira chikumbiro chemagweta ari kumirira murongi wemisangano muMDC, VaAmos Chibaya, kuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC, VaLuke Tamborinyoka, vanoti zviri kuitwa nemapurisa nehurumende zvinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Vamwe Amai Vange Vari Pakuratidzira muHarare Votaura Pamusoro Pekurohwa Kwavaita
Vamwe Baba Vabva Kumusha weHatfield Votsanangura Zvaitika
Hurumende Inoti Ichiri Kuferefeta Kutsakatika kwaVaItai Dzamara
Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti VaItai Dzamara, avo vakapambwa nevanhu vasinga zivikanwe makore mana apfuura, vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana.